Repoblikan'i Kongo: Ny fanjakan'ny loza voajanahary dia nambara fa tondra-drano namindra toerana 50K
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Repoblikan'i Kongo: Ny fanjakan'ny loza voajanahary dia nambara fa tondra-drano namindra toerana 50K
Ny governemantan'ny Repoblikan'i Kongo dia nanambara ny fanjakan'ny voina voajanahary taorian'ny farafaharatsiny olona 50,000 tao amin'ny faritany telo no nafindra toerana noho ny tondra-drano lehibe.
Ny filankevitry ny minisitra dia nilaza fa nisy oram-be nivatravatra tao amin'ny faritanin'i Likouala, La Cuvette ary Plateaux nandritra ny herinandro maro.
Nilaza ny governemanta fa ny tondra-drano mahery vaika dia nahatonga ny fahaverezan'ny toeram-pambolena sy ny fiompiana ary ny tahirin-tsakafo ary nanjary nipoitra indray ireo aretina nateraky ny rano. Olona 50,000 XNUMX eo ho eo manamorona ny Ony Kongo no ao anaty fahantrana, hoy ny filankevitra.
Victor Ngassi, sekretera jeneralin'ny Makotipoko, 400km mahery (248 miles) any andrefan'ny Brazzaville, dia nilaza fa ny olona ao amin'ny distrika dia mosarena ary miandry ny fanampian'ny governemanta.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia mamaritra ny zavatra niainan'ny vahiny